Home » အသားပေး » ဘီစီကို Hydro: တစ်သုတအဖြာဖြာ Touch ကိုအတူတစ်ဦးက PSA
ဘီစီကို Hydro: တစ်သုတအဖြာဖြာ Touch ကိုအတူတစ်ဦးက PSA
သူတို့အလုပ်မအိမ်မှာပရိသတ်ကိုများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းဆီးဖို့ဆိုရင်ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုကြေငြာမယ့်စိန်ခေါ်မှုသတင်းစကားနှင့်အတူရိုးရှင်းဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ညာဘက်ရောနှောခြင်းမရှိလွယ်ကူသောအလုပ်-သို့သော်အဆိုပါအဆက်မပြတ် Group မှကယ်လွှတ်ခြင်းငှါတပ်ဆင်ထားခဲ့သည်တဦးတည်းဗန်ကူးဗားအခြေစိုက်ကာတွန်းရုပ်ရှင်စတူဒီယိုဖွင့်ကြောင်းရှာဖွေခြင်း။
sequence လိမ္ပါဝါလိုင်းများ၏အန်တရာယျအသေးစိတ်, လျှပ်စစ်ပါဝါကုမ္ပဏီဘီစီကို Hydro များအတွက် 30-ဒုတိယအစက်အပြောက်ကိုဖန်တီးရန်ချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအယူအဆတစ်ခုမျက်စိ-ဖမ်းဗေဒကနေတစ်ဆင့်အဖြစ်ရှင်းလင်းစွာတတ်နိုင်သမျှသတင်းစကားသယ်ဆောင်တစ်ဦးဆီးနှင်းကမ္ဘာလုံးအတွင်းပါရှိသောဒစ်ဂျစ်တယ် diorama တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။
အဆိုပါအဆက်မပြတ်အဖွဲ့သည်တစ်ဦး Full-CG ပွဲချင်းပြီးကိုယ်တိုင်ကကိုင်တွယ်ရန်နိုင်စွမ်းရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါထားတဲ့တက္ကစီဗန်ကူးဗားကဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ယူဆောင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်အဆက်မပြတ်အယူအဆအနုပညာနှင့်ကာတွန်း-တစ်ရုံလေးပတ်အတွင်းပြီးစီးရန်အလုပ်များကိုကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်း, dev ကြည့်မော်ဒယ်ကိုင်တွယ်။
"ကျနော်တို့ကအယူအဆ-အောက်ပါကမေးခွန်းတစ်ခုခဲ့ကြောင်းပေးခဲ့သည် '' ကျနော်တို့ဘတ်ဂျက်ပေါ်မှာဤပွုနိုငျသနညျး '' နှင့်ဖြစ်ပျက်စေတဲ့နည်းလမ်းရှာဖွေတာ, "မှ Ian Kirby, အဆက်မပြတ်ရဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။
"ကျေးဇူးတင်စရာကျနော်တို့ CG မှာကောင်းသောနေပေမယ့်ကျနော်တို့ဒီဇိုင်းဗေဒမှာလည်းအကောင်းပါပဲ, ဤစီမံကိန်းကိုမယ့်ဖြောင့်တက် CG ရိုက်ချက်ထက်ဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုပိုမိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာမုန်တိုင်းထန်ခံစားရပေမယ့်ချစ်စရာ-ငါတို့ကဲ့သို့ကြောက်လန့်ဖြတ်ပြီးလာမယ့်စရာမလိုဘဲအရေးပါတဲ့သတင်းစကားကိုပို့ဆောင်, ကောင်းစွာဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "
တစ်ဦးဆီးနှင်းကမ္ဘာလုံးအတွင်းပိုင်းအသက်ရှင်သောသတ္တဝါကမ္ဘာကြီး Creating ဟာအဆက်မပြတ်အသင်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးမျိုးတာဝန်ထားခဲ့ကြသည်ဆိုလိုသညျ။
"တစ်ဦးကဗေဒစိန်ခေါ်မှုဇာတ်ကောင်ရဲ့မျက်နှာအသေးစိတ်ကို၌ရှိ၏" Kirby ကပြောပါတယ်။ အဖြစ်မကြာမီသင်ပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို add အဖြစ်, သင်ထိပ်ကိုကျော်မယ့်အန္တာရာယ်ရှိသောကြောင့် "ဒါဟာတစ်ဒဏ်ငွေလိုင်းရဲ့, ဒါပေမယ့်သင်ကအရမ်းနည်းနည်းကိုသုံးပါလျှင်, သူတို့သည်နစ်မြုပ်နေသောမျက်စိခြေစွပ်နှင့်အတူလောကကိုလညျးကိန်းဂဏန်းများနဲ့တူကြည့်ရှုပါ။ ကျနော်တို့သူမကမှန်ကန်သောကြည့်ရှုနှင့်လက်ျာချိန်ခွင်လျှာခဲ့သေချာစေရန်တစ်ဦးတည်းမိန်းကလေးအများအပြားကြားမှာပြုလေ၏။ "
facial features တွေသတိထားအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုအပ်တစ်ခုတည်းသောဒြပ်စင်ကြဘူး။ တစ်ဦးသိကောင်းစရာများကြေညာချက်အတိုင်း, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာအန္တရာယ်များတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူပုံဖော်ကြရသည်။
"ဒါဟာကျနော်တို့ကကမ္ဘာလုံးများအတွက်အစားမိုဃ်းပွင့်အရွက်ကိုသုံးစွဲဖို့ရှိတယ်လို့ရယ်စရာပါပဲ" ဟု Kirby ကပြောပါတယ်။ "သို့သော် client ကိုအကြောင်းရင်းအဖြစ်လေတိုက်ခြင်းနှင့်မုန်တိုင်းများအာရုံစိုက်စေချင်တယ်။ ဗန်ကူးဗားဆောင်းဦးရာသီမိုးရွာရွာ, အရွက်, နှင့်လေတွေအများကြီးကိုမြင်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အဘို့သည် သွား. အဘယျသို့င်! "
ဒန် Sioui, အဆက်မပြတ်အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, တကဒေသခံကုမ္ပဏီအတွက်အပြီးသတ်ခဲ့သည်အထူးသဖြင့်သည်အတိုင်း, အသင်းရဲ့အလုပ်၏ prouder နှင့်ဒေသခံဗန်ကူးဗားရုပ်မြင်သံကြားဘူတာအပေါ်နီးပါးနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်မရပါ။
"သင်တဲ့ TV show ကိုစောင့်ကြည့်နေနှင့်သင်၏အလုပ်သငျသညျများ၏ရှေ့မှောက်၌ပေါ်လာသောအခါအေးမြင်, သင်အခြားသူများကိုလူရာပေါင်းများစွာတစ်ချိန်တည်းမှာကကိုကြည့်ရှုသည်ကိုငါသိ၏။ အကြောင်းအထူးတစ်ခုခုရှိတယ်။ "
အဆိုပါဘီစီကို Hydro ပွဲချင်းပြီးဒေသခံတီဗီဖန်သားပြင်လွှမ်းမိုးဒါပေမယ့်လည်းသိမ်မွေ့ပြည်တွင်းဖြစ် element တွေကိုတပ်ဆင်ထားပေသာ။ "ရေတိုအတွက် featured အဆိုပါနည်းနည်းယောက်ျားလေးမှ Ian ရဲ့သားပြီးနောက်လုပ်ပါတယ်" ဟုအကြီးတန်းထုတ်လုပ်သူ Marta Mintenko Knapik ဖော်ပြသည်။ "အခါတိုင်းကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှငါတို့ရှိသမျှသည်မျိုးဤစီမံကိန်းများသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကိုပစ်!"
နောက်ဆုံးတွင်အဆိုပါဘီစီကို Hydro ပွဲချင်းပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှတက takeaway အဆက်မပြတ်နောက်ကျောကိုသူတို့အသိုင်းအဝုိင်းမှတစ်ခုခုပေးရတယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
"ကျနော်တို့ကကောင်းတဲ့အရာပဲမြေကြီးတပြင်နျဖိုးထားရဲ့နဲ့လူကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကတစ်ခုခုရောင်းအားမရင့်," Sioui ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာသင်သည်သင်၏ကလေးတွေကိုပြဂုဏ်ယူနိုင်ပါတယ်တစ်ခုခုပါပဲ။ ဒါဟာကောင်းသောသတင်းစကားရှိပါတယ်။ "
"ဆယ်မီတာကွာနေတဲ့ဓာတ်အားလိုင်းကနေဆက်နေရန်သင့်ကိုပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင်, ဒါကြောင့်စောင့်ကြည့်ပေမယ့်ကိုကြည့်ဖို့အမြင်အာရုံအားကြီးသောင်လို့ပဲ။ အဲဒီမှာကောင်းတစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုလည်းရှိတယ်, "Kirby အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ "ဒါဟာ CG ကနေသွားကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုသို့ငုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ခဲ့သည် Transformers ဤစက်ရုပ်။ သူတို့လတ်ဆတ်တဲ့, ဒါပေမယ့်လည်းအသုံးဝင်သောတစ်ခုခုတစ်ခုခုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်ကဲ့သို့အသင်းခံစားရတယ်။ "
တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ်	2017-05-25
ယခင်: CAD Designer / ဗိသုကာစာတ / 3D Renderer
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "တစ်ဦးသုတအဖြာဖြာ Touch ကိုအတူတစ်ဦးက PSA: ဘီစီကို Hydro" ။ http://www.broadcastbeat.com/a-psa-with-a-homegrown-touch-bc-hydro/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။